नया गित ‘लुट्न सके लुट्’ कान्छा युट्युबबाट हट्यो ! पशुपति शर्माले लेखे यस्तो म्यासेज – Complete Nepali News Portal
नया गित ‘लुट्न सके लुट्’ कान्छा युट्युबबाट हट्यो ! पशुपति शर्माले लेखे यस्तो म्यासेज
ScotNepal February 17, 2019
चर्चित लोक गायक पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट् कान्छा’ गित युट्युबबाट हटाइएको छ । सर्वाधिक मन पराइएको गित हटाउनुपरेको कारण उनले आफ्नो फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।यो गित शनिबारसम्म नेपालको युट्युब ट्रेन्डिङमा १० औं नम्बरमा परेको थियो ।
उक्त गित युटुब बाट हटाउन साथ शर्माले फेसबुकमा एउटा स्टाटस सार्बजनिक गरेका छन् तल हेर्नुहोला ।
”आदरणीय श्रोता एवं दर्शकवृन्द साथै मेरा प्यारा शुभचिन्तक ज्यु हरुमा सादर नमस्कार !
ब्याङ्ग्यात्मक एवम् चेतना मुलक गीत गाउँदै आएका पछिल्लो समयका चर्चित गायक पशुपति शर्माले नयाँ गीत बजारमा ल्याएका थिए। शर्मा ले नेपालको राजनीति प्रति आक्रोसित हुँदै व्यग्यात्मक शैलीमा राजनीतिक दललाई खबदारी गरेका थिए। गायक शर्माले लुट्न सके लुट कान्छ, अरु देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट’ बोलको गीत बजारमा सार्बजनिक भएको थियो।
उक्त गीतको म्युजिक भिडियो शर्माले बिहीबार आफ्नै युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए भने गीत मार्फत शर्माले देशमा ब्याप्त भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कारलगायतका विषलाई ब्याङ्ग्यात्मक रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। गीतमा शब्द, संगीत पनि गायक शर्माकै रहेको छ। गीतको म्युजिक भिडियोमा पशुपती शर्मा, मञ्जु विक र प्रज्योल भण्डारी लगायतका कलाकारको अभिनय देख्न सकिन्छ। भिडियोलाई निर्देशन दुर्गा पौडेलले गरेका हुन भने छायांकन पनि दुर्गा पौडेलले नै गरेका छन्। यसको सम्पादन नबिन घर्ती मगरले गरेका हुन्।